Joker On Lawn သည်ငရဲကို Trick R 'ကုသသူများထံမှ i - Horror ကိုကြောက်ရွံ့လိမ့်မည်
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း Joker On Lawn သည်ငရဲကို Trick R 'ကုသသူများထံမှခြောက်လှန့်လိမ့်မည်
Joker On Lawn သည်ငရဲကို Trick R 'ကုသသူများထံမှခြောက်လှန့်လိမ့်မည်
by admin ရဲ့ စက်တင်ဘာလ 9, 2015
ကရေးသား admin ရဲ့ စက်တင်ဘာလ 9, 2015
'The Family of Death' တွင် Joker သည်သူပြုခဲ့သမျှရူးသွပ်သောအရာများထဲမှတစ်ခုကိုပြုလုပ်သည်။ သူကတစ်ယောက်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ချွတ်ခိုင်းသည်။ ထို့နောက်သူကရိုင်းစိုင်းစွာပြန်ပေါ်ကပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ Kinda ရူး, ညာ? ငါအနည်းဆုံးနည်းနည်းနည်းနည်းကိုဆိုလိုတာ?
ကောင်းပြီ ThinkGeek သည် The Joker ၏ပရိသတ်များအားဆက်လက်ပေးအပ်မည့်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့သည်။ 'The Death of the Family' ဇာတ်ကားမှထွက်ပေါ်လာသည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် Joker သည်စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
၃၆ x ၂၄ x ၁၀ လက်မရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့်မြက်ခင်းပြင်အဆင်တန်ဆာသည် Gotham ၌ပင်လှည့်စား r 'ကုသသူများထံမှငရဲကိုကြောက်ရန်သေချာသည်။ ဒါဟာ Joker ရိုင်းစိုင်းတဲ့အပြုံးနှင့်အပြုံးအပြုံးနှင့်ပြည့်စုံမြက်ခင်းထဲက clawing ပါရှိပါတယ်။ သူသည်ဒေါ်လာ ၈၉ သာဖြစ်ပြီးဝယ်ယူနိုင်သည် ဒီမှာ.
အနုပညာရှင်ကြည်ညိုလေးစားဖွယ်ကလေးများအဖြစ် Horror Icons ဆွဲ
Freddy Krueger အသစ် POP! ဗိုင်းနိုင်းကစားစရာသည်ဆီးချိုလက်အိတ်တပ်ဆင်ထားသည်